Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » युवराज खतिवडा ‘बाह्य शक्तिको इशारामा चलेको’ भन्दै कतै नियुक्ति नगर्न दबाब !
युवराज खतिवडा ‘बाह्य शक्तिको इशारामा चलेको’ भन्दै कतै नियुक्ति नगर्न दबाब !
काठमाडौं, भदौ २१ । पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रीयता घटेको भन्दै सरकार र नेकपा भित्र समिक्षा शुरु भएको छ । खतिवडाले देश र जनताको हितमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित भएकोबारे समिक्षा शुरु भएको हो ।
खतिवडाको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्रका धेरै मेरुदण्ड धराशायी भयो । शेयर बजार सबैभन्दा बढी मारमा पर्यो । घरजग्गा कारोबार ठप्प भयो । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण पाउन कठिन मात्र नभई ऋण पाउने कतिपय हद नै कसिलो बनाइयो । ठुला उद्दोगी व्यवसायीको स्वार्थमा मात्र उनी चले । घरेलु तथा साना उद्दोग सञ्चालन गर्नेहरु धान्न नसकेर बन्द गर्ने अवस्थामा पुगे ।
कृषि क्षेत्रमा ठुलै समस्या आयो । उनकै नीतिका कारण कृषकहरुले सहज तरिकाले ऋण पाएनन् । देशको कृषि क्षेत्र सबैभन्दा मा’रमा पर्यो । समयमा मल पाएनन् । विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन सकेन । निर्माणकर्ताहरु मारमा परे । देशको हितमा भन्दा पनि उनी विश्व बैंक र पश्चिमाहरुको स्वा र्थमा चलेको चर्चा नेकपाभित्र चलेको छ । उनले समाजवादमा जाने नेकपाको नीतिमा समेत ध क्का पुर्याउने गतिवधि गरेको निष्कर्ष नेकपाको ठुलो पंक्तिले निकालेको छ ।
विगतमा आर्थिक मामलाका जानकार नभएपनि विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्र पाण्डेले प्रशंशा कमाएका थिए । उनीहरुले देशहितमा केन्द्रित भई काम गरेका थिए । तर, खतिवडा बाह्य शक्तिलाई खुशी बनाउनमै केन्द्रित भए ।
नेकपाभित्र राजनीतिक पृष्ठभुमिका व्यक्ति अर्थमन्त्री नबन्दा तल्लो तहको जनतासम्मले आर्थिक नीतिबाट लाभ लिन नसकेको उल्टै दुरगामी असर पर्ने हानीनोक्शानी पुगेको विश्लेषण भइसकेको छ । अर्को चुनावमा जाँदा नेकपाले ठुलो धक्का खानुपर्ने अवस्था बनेको भन्दै चिन्ता समेत हुनथालेको छ । यसमा खतिवडाको आर्थिक नीति नै मुख्य कारण छ ।
खतिवडा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष सल्लाहकार बन्न दौडधुपमा छन् । उनलाई ल्याएर अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । तर, त्यसको नेकपाभित्र वि रोध बढेको छ । ओलीले खतिवडालाई फेरि पनि छायाँ अर्थमन्त्री बनाएर राख्न खोजेमा नेकपाभित्र ठुलै वि वाद हुनसक्छ । उनलाई कतै पनि नियुक्ति नदिन दबाब बढेको छ ।